1 iyi ọ bụla Format ka Roku
2 Stream Video si PC ka Roku
4 Roku Atụmatụ na usoro
5 Roku Nchọpụta nsogbu
Ya mere, ị na dị nnọọ wee otu n'ime ndị kasị ewu ewu na gụgharia ngwaọrụ na ahịa - a Roku. Ọfọn, ị dị na-eji nke a onwunwu ọhụrụ igbe oji iji strimụ Netflix? Ọfọn, ọ nwere ike ime a dum ọtụtụ ndị ọzọ. Ebe a na-10 kemfe Atụmatụ na atọ ka turbocharge gị Roku ntụrụndụ ahụmahụ.
Play ọdịnaya site na gị na mpaghara na netwọk
Chọrọ enwe n'ụlọ gị gị na fim ma ọ bụ ebudatara ọdịnaya na gị Roku? Wondershare Video Ntụgharị nwere ike aka. Dị nnọọ download na wụnye software na PC gị na na ẹkedori Media Server plugin. Ọ bụghị nanị na anamde akwa ọrụ nkwanye gị niile Obodo media, kamakwa-enyere gị aka ịnweta ọdịnaya n'ọbá akwụkwọ na gị Roku. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ọbụna jikwaa gị collection ma tinye cover ozi maka gị video faịlụ.
Ekiri YouTube videos
Ọ bụrụ na ị ekesịpde gị Roku tupu December nke 2013, ị ga-achọpụta na, e nweghị ukara YouTube ngwa na ọwa Store; na ọbụna ugbu a, ngwa ahụ bụ nanị dị na Roku 3 na Canada, US, UK, na Republic nke Ireland, nke bụ ihe na-erughị ezigbo. Ma ị ka nwere ike na-ekiri YouTube vidiyo na ndị ọzọ ngwa. Otu n'ime ihe ịga nke ọma ndị bụ MyVideoBuzz, na i nwekwara ike enuba YouTube gị Roku site na iOS ma ọ bụ Android ngwaọrụ eji Twonky Doo.
Jiri gị mobile ngwaọrụ dị ka a na n'ime ime obodo
The mgbe Roku ime abụghị adaba iji? Echegbula! Na Roku ngwa, ị nwere ike mfe ime ka gị na Android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ a dị ike Roku akara center. Ozugbo arụnyere, ị nwere ike mfe agagharị, tinye, na ọnụego ọwa, tinye ederede site na iji ngwaọrụ gị keyboard, ma ọ bụ iyi ọdịnaya site na gị ngwaọrụ mkpanaaka. Ọzọ dị ukwuu akụkụ bụ na, ngwa-arụ ọrụ niile ọgbọ nke Roku egwuregwu.
Tinye onwe ọwa
E wezụga ọha na eze ọwa depụtara n'ime Roku ọwa Store, e nwekwara ụfọdụ onwe ọwa nke nnọọ adịghị e ukara mma site Roku. Ma i nwere ike mfe tinye ha gị Roku ngwaọrụ. Dị nnọọ abanye n'ime Roku saịtị na-ahụ "Tinye a Private ọwa" njikọ. Wee tinye ohere koodu na ọwa ga-ozugbo-atụkwasịkwara ngwaọrụ gị. Ị nwere ike ịlele si Streamfree.tv na RokuGuide.com iji nweta ụfọdụ oké selections. Ma buru n'uche na ndị a onwe ọwa na-adịghị kwadoro. Roku, si otú adọkpụ arụmọrụ nwere ike ime n'oge playback.
Ịmụbawanye ọwa nchekwa ikike na a Micro SD kaadị
Ọ bụrụ na-agba ọsọ nke nchekwa ụlọ channelụ na gị Roku, ị pụrụ nanị mụbaa nchekwa ikike site inserting a Micro SD kaadị n'ime oghere na n'azụ nke unit. Biko mara na oghere ike-eji na-echekwa video faịlụ ma ọ bụ ndị ọzọ na ọdịnaya. Mgbe kaadị arụnyere, flash kaadị ga-akpaghị aka-Ị. Ọ bụrụ na kaadị wepụrụ n'ihi ihe ọ bụla, ndị niile ngwa ga-arụnyere ọzọ ozugbo ịtinye azụ.
Hazie ọwa n'ihuenyo
Nwetara nnọọ ọtụtụ nke ọwa na gị isi n'ụlọ ihuenyo na chọrọ iji hazie ha? N'ezie, ị nwere ike mfe ịkwaga ha gburugburu na otu ha ọnụ. Ime ya, dị họrọ ọwa na ị chọrọ ịkwaga, na pịa Option igodo gị Roku ime (ọ bụ akara mmuke * isi). Mgbe ahụ a submenu ga-gbapụta, site na nke ị nwere ike họrọ ịgbanwe ọwa Position. Ọwa akara ngosi ga-pụta ìhè, n'ihi ya, ị nwere ike pịgharịa ya na ọnọdụ na ị chọrọ ịkwaga, na pịa OK.
Ịgbanwe gụgharia bit ọnụego
Otu ụzọ dozie stuttering mbipụta na elu definition ọdịnaya bụ iji Roku Mmepụta menu. Ma ọ bụrụ na ị bụghị ala iji ọzọ oru menus, ị ga-mma adịghị nwalee usoro a.
Iji nweta a menu, jide n'aka na-amalite usoro si n'ụlọ ihuenyo. Wee pịa Home button ugboro ise, weghachi button ugboro atọ na Fast Gaanụ n'Ihu button ugboro abụọ, na ihe dị ka ọkara nke abụọ n'etiti onye ọ bụla button pịa. Ebe a ị nwere ike họrọ a kacha nta bit ọnụego na-egwu video.
Jiri PIN iji chebe n'enweghị ikike ịzụrụ
Roku nwere ikike igbochi kpọmkwem omume iji a anọ PIN ọnụọgụ koodu. Site na iji nke a PIN, ị nwere ike izere n'enweghị ikike ịzụrụ. Ọ nwekwara ike etinyere mgbe agbali tinye ọwa ma ọ bụ egwuregwu si Roku, mgbe ị ka nwere ike tinye ọha na onwe ọwa na-enweghị abanye PIN nọmba.
Kwụsị Roku si agbanwe agbanwe gị isiokwu a apụta otu
Play egwuregwu na Roku3
Na ọhụrụ emelitere ime akara, ị nwere ike ugbu a na-eji mmegharị na-egwu egwuregwu dị ka Iwe nnụnụ (nke a gụnyere for free) na Roku 3. The ime agwa WiFi, nke pụtara na ị na-adịghị mkpa akara-nke-n'anya na ọkpụkpọ , na ọ na-abịa na a kemwepu, kemeghi nkwojiaka eriri.
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka gụgharia Media ka Roku
Olee otú iyi ọ bụla Video na Audio Format ka Roku
10 Songs maka My Favorite Girl ke ofụri World - mama m
Olee otú Play ọ bụla WMA on Android Devices Mfe
Video joiner maka Mac: Olee otú Jikọọ Videos na Mac
> Resource> Video> 10 Atụmatụ na usoro ime ka ọtụtụ nke Roku